> Resource > Flash Drive USB> Garmin Ant ul Recovery dib u soo ceshano Khasaaray Waxqabadka Data
Sidee baan ka USB Garmin Ant ul soo kaban karto, Data?
Waxaan aad u badbaadiseen xogta aan Garmin oo dhan qalab taam in aan Garmin USB Ant ul, taas oo ah xogta dhaqdhaqaaqa 2 sano ah oo aan. Shalay aawadiis qalad, waxaan la tirtiro xogta dhaqdhaqaaqa oo dhan. Sidee layga sii socotay inay u soo ceshano? Ma jirtaa fikrad kasta oo wanaagsan? Best xiriira.
Tani dhab ahaantii waa madax xanuun, gaar ahaan marka xogta la tirtiray waa dhan oo ku saabsan taam iyo caafimaadka. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan kuu sheego in aad weli fursad in ay dib u hesho xogta lumay, oo dhan la USB Garmin Ant ul software soo kabashada.
Waxaa si xoog leh u soo jeediyay in aadan gelin wax xog cusub ee USB Garmin Ant ul, waayo, xogta lumay si fudud loo dabooli karto files cusub. Markaas waxaad ka heli kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac inuu ka soo kabsado xogta ka Garmin UAB Ant ul. Tani qalab waxtar leh waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano xogta kaliya ma ahan hawl ka USB Garmin Ant ul, laakiin sidoo kale sawiro, videos, files audio iyo in ka badan. Soo kabashada waa mid fudud, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay ku xidhmaan aad USB Garmin Ant soo shirtagi your computer iyo bilowno barnaamij si ay u iskaan.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery iyo bilowdo dib u soo kabashada hadda.
3 Talaabada inay Qabtaan USB Garmin Ant ul Data Recovery
Bal aan soo ceshano xogta ka USB Garmin Ant soo shirtagi Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac ka heli kartaa version Mac iyo raac tallaabooyinka la mid ah.
Tallaabada 1 Ladnaansho Xogta laga USB Garmin Ant soo shirtagi doono "lumay Recovery File" Mode
Connect aad USB Garmin Ant soo shirtagi your computer iyo ordi Wondershare Data Recovery. Waxaad heli doontaa interface la soo kabashada 3 hababka: "lumay Recovery File", "Recovery Barzakh", iyo "ceeriin Recovery". Halkan, waxaan dooro "lumay File Recovery" hababka dib u soo ceshano, formatted ama la tirtiro xogta lumay ka USB Garmin Ant ul.
Tallaabada 2 baarista USB Garmin Ant ul
Barnaamijka waxaa hadda lagu ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan drives adag iyo aaladaha kaydinta dibadda on your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya ay doortaan mid ka mid ah si aad u USB Garmin Ant ul oo guji "Start Scan" inaad raadiso files lumay.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubiyo in USB Garmin Ant ul in si wanaagsan loo xiran karo your computer.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga USB Garmin Ant ul
Hadda waxyaabaha aad badiyay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha bidixda ee suuqa kala barnaamijka sawirka kadib. Waxaad ka arki kartaa magaca file asalka ah si loo hubiyo in xogta dhaqdhaqaaqa ayaa la helay ama aan. Haddii aad doonaysid in aad dib u soo ceshano sawiro, waxaad iyaga ku eegaan karo, ka hor soo kabashada.
Markaas fadlan dooro faylasha aad doonaysid in aad dib u hanato oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo.